Dhimasho Iyo Dhaawac ka Dhashay Qareeno Weerar ku Qaaday Isbitaal!!(Sawiro) AwdalMedia Awdal Media Dhimasho Iyo Dhaawac ka Dhashay Qareeno Weerar ku Qaaday Isbitaal!!(Sawiro)
Dhimasho Iyo Dhaawac ka Dhashay Qareeno Weerar ku Qaaday Isbitaal!!(Sawiro)
Saddex bukaan ayaa geeriyootay markii ay boqollaal qareenno ah weerar ku qaadeen isbitaal ku yaalla magaalada Lahore ee dalka Pakistan, xilli uu socday mudaharaad salka ku haya muran u dhaxeeya Dhakhaatiirta iyo Qareennada.
Cabsi badan ayaa ka jirtay halkaas, dhakhaatiirtii iyo howlwadeennadii kale ee caafimaadka ayaana wada dhuuntay.
Arrintaas ayaa sababtay inay daryeel heli waayaan bukaano ay ku jireen kuwo ay xaaladdoodu aad u liidato.
Booliska ka hortagga rabshadaha ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa si ay ugu kala eryaan qareennada qalalaasaha sameynayay, iyagoo 20 ruuxna xabsiga u taxaabay.
Qareennada ayaa ka careysnaa hab dhaqan qallafsan oo dhakhaatiirta isbitaalkaas lagu eedeeyay inay bishii lasoo dhaafay ku sameeyeen qareenno saaxiibbadood ah.
Sida laga soo xigtay maamulka isbitaalka, in ka badan 200 oo qareenno ah, oo ulo watay, ayaa weeraray isbitaalka maalintii Arbacada.
Mas’uuliyiinta ayaa sheegay in qareennadu ay si xoog ah ku gudbeen ilaaladii amniga isbitaalka, ka dibna ay kooxo isku kala qeybiyeen, iyagoo weeraray qeybo kala duwan oo ka mid ah waaxyaha isbitaalka.
Wasiirka la garaacay ayaa halkaas u tagay si uu xasiloonida u soo celiyo.
Waxay sidoo kale weerareen goob hoy u ah kalkaalisooyinka Isbitaalkaas, halkaasoo ay ka jajabiyeen alaabtii taallay, sida lagu sheegay warqad cabasho ah oo ay qoreen maamulka Isbitaalka.
Qareennada ayaa waxay burbur gaarsiiyeen gawaari taallay bannaanka hore ee isbitaalka, iyagoo dab qabadsiiyay ugu yaraan hal gaari oo ka mid ah kuwa ay boolisku wateen.
Qaar ka mid ah mudaharaadeyaasha ayaa la sheegay inay rasaas kor u rideen markii ay goobta tageen ciidanka ka hor-tagga rabshadaha.
Ilo-wareedyo laga helay isbitaalka ayaa sheegay in ugu yaraan saddex bukaan, oo kala ah haweeney iyo labo nin, ay u dhinteen sabab la xiriirta dhakhaatiirta oo daryeeli waayay qalalaasaha awgiis.
Waxaa la aaminsan yahay in haweeneydu ay ku jirtay qeybta la dhigo bukaannada ay xaaladdoodu aadka u liidato.
Qareennada ka qeyb qaatay weerarka isbitaalka ayaa si weyn loogu cambaareeyay warbaahinta Pakistan.
“Dadka reer Pakistan waxay muddo sannado ah goob joog u ahaayeen qalalaase ay sameynayeen dad qareenno ah”, sidaas waxaa Khamiistii tiri mid ka mid ah wariyeyaasha telefishin lagu magacaabo Geo TV.
Afrasiab Khattak, oo horay guddoomiye uga ahaa ururka madaxa bannaan ee u dooda xuquuqda aadanaha Pakistan(HRCP), ayaa bartiisa Twitter-ka ku cambaareeyay dhacdadaas.
Maamulka Gobolka Punjab oo ka cabsi qaba inay mudaharaadyo kale oo rabshado wata dhacaan ayaa dalbaday ciidamo dheeraad ah.
Nin ka Qeyb Qaatay Bur-burinta Masjidkii Babri Ee India Oo Hada Dhisay 90-Masjid.
Ra’iisul wasaare Khayre Oo ka Qeyb-galay Furitaanka Madasha Dooxa.(Sawiro)